Mayelana NATHI - Runchen Industry Co., Ltd.
URunchen Industry Co., Ltd.ngumhlinzeki wezixazululo ze-Ice-cream okhokhelwa yithimba elihle kakhulu lonjiniyela abanolwazi abanolwazi olunolwazi ngeminyaka eminingi embonini ye-ayisikhilimu, kungaba abakhiqizi bemishini ye-ayisikhilimu noma amafektri ka-ayisikhilimu.
I-Runchen ihlinzeka kakhulu ngezinsizakalo zefemu ka-ayisikhilimu ezindaweni ezingezansi:
Isisekelo sezinsizakalo ezigxile kumakhasimende kanye nezinzuzo zobuchwepheshe, uRunchen uzibophezele kwimishini esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo enhle kakhulu nokusekelwa kobuchwepheshe. Silangazelela ukukhetha kwakho ku-Runchen
URunjin uvunyelwe njengomhlinzeki womhlaba wonke ngabakwa-Unilever. Ibhizinisi lethu selifinyelele emakethe yabo e-Indonesia, Philippine, Australia, South Africa. Futhi sigcina ukuthambekela okwandayo emathubeni ebhizinisi. Leli yingqophamlando ebalulekile yokwamukelwa kwamakhasimende ezimakethe.
URunchen usungule ihhovisi legatsha edolobheni laseTaizhou elibizwa ngokuthi yiTaizhou Runjin Machinery Co, Ltd iRunjin Machinery Co., Ltd ingumnikazi wesitshalo esingu-4000m2, abasebenzi abangama-60 kufaka phakathi ochwepheshe abayi-15 abasebenza kakhulu futhi abanolwazi emkhakheni womshini.
URunchen wacwaninga futhi wathuthukisa imishini ehlukahlukene yokusebenzisa kahle u-ayisikhilimu, eyayibonwa ngamakhasimende amaningi futhi yathandwa kakhulu emhlabeni jikelele.
Sithuthukise amakhasimende eChile, e-Australia, e-Dubai, eMexico, emakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Ukuze sihlangabezane nezidingo eziqinile embonini yokudla, sibeka indinganiso ephezulu yamazwe omhlaba ngemishini yethu. Zonke izingxenye zethu zikagesi nezingxenye eziyinhloko zihambisana nomkhiqizo owaziwayo, njenge-Siemens, iBonfiglioli, iSchneider, njll.
Ngemuva kweminyaka eminingi yesipiliyoni semakethe yasekhaya nobuhlobo obunokwethenjelwa obakhiwe, uRenchen waqala ukusabalalisa ibhizinisi kulo lonke izwe.
Ukwethulwa kwentuthuko entsha ye-Ice cream ifomula uhlobo lwendabuko futhi kuzuzwe impumelelo ekhanyayo ngo-2002.
I-Runchen yasungulwa ngo-2001.